Artist Oleg Soloviev
Voronye. Ihe osise mmanụ 90x70cm. 45 000p.
Agba mmanụ, kwaaji 90x70cm, anụmanụ, avant-garde, pop art Mmanụ, kwaaji 90x70cm, anụ ọhịa, avant-garde, pop art Ihe osise dị n'ime ime Foto dị na […]
Egwuregwu anụmanụ Z, kwaaji, mmanụ, 90х70см, 40 000p.
Ngwurugwu Anumanu Z Izu ojoo. sere, kwaaji, mmanụ, 90х70см. Nchịkọta. Ihe osise, mmanụ na kwaaji, 90x70cm. egosipụta Interior […]
Cosmos 2018, kwaaji, mmanụ, 90х70см 35 000p.
Cosmos 2018, kwaaji, mmanụ, 90х70сm Ihe osise n'ime ime Kosmokot 2018, kwaaji, mmanụ, 90T70-t-uwe elu ojii na-acha ọcha pusi Tyson Kosmokot […]
Ọnwụ whale, mmanụ sere 70x90cm. 30 000p.
Ọnwụ whale. (mmanụ sere 70x90cm, pusi, pusi, nwamba, nwamba) Ihe osise dị n'ime ime mgbidi sere T-uwe elu na pusi Kosatiki (akwụkwọ, ink, […]
Nri abalị, 60х80см, kwaaji, mmanụ. 40 000p.
Nri abalị. Anwụnta dị n'isi. Mmanụ 80x60. 2008
Elu ụlọ nke St. Petersburg. 60х45, akwụkwọ, gouache, 2001
Petrogradka. 50.90, ọrụ akara. 2005
The ụlọ nke imewe ngalaba nke Stieglitz Academy, Okporo ámá Chaykovskiy, 60x86, akwụkwọ, gouache, 2002
Alakụba na Petrogradka. 45.90, akwụkwọ oji, pen pen. 2005
St. Petersburg, Ogige Pushkin. 96kaadiboodu x43mm, ink,gouache. 2006
Ebe e wusiri ike nke Peter-Pavel
Berth. Ebe e wusiri ike nke Peter-Pavel. 80х40 nka, pensụl unyi. 2002r.
Ebe ịchụàjà Pergamon
Ebe ịchụàjà Pergamon. Ihe ọkpụkpụ. 110x70, katọn, ihe nrịbama, gouache. 2005
Itegbọ okporo ígwè Vitebsk
Itegbọ okporo ígwè Vitebsk.
Àkwà mmiri nke St. Petersburg
Àkwà mmiri na Fontanka dị nso n'Ogige Ugwu. Okirikiri obodo.
Assembly Hall Academy nke Arts aha mgbe Stieglitz. 110x70, katọn, pensụl, pastel. 2006
Pestel Street, Chọọchị, 86Ochi 40, akwụkwọ, gouache, 2002
Ubi okpomọkụ. 80x30, kraft, pensụl carbon. 2001
Rhinoceros ebe ịbịaru. 30x20, akwụkwọ, ihe nrịbama, helium itienna. 2001
Ihe osise nke mantis ebe
Ebe osise. Nnukwu ahụhụ.
Itegbọ okporo ígwè Vitebsk. 60x60, akwụkwọ oji, helium ọcha pen. 2005
Ebe ịchụàjà Pergamon. Ihe ọkpụkpụ. 30x20 akwukwo, ink. 2004
Akwa mmiri, 80x60, akwụkwọ, gouache, 2002
Ebe ịchụàjà Pergamon. Ihe ọkpụkpụ. 70х70 nka, ihe nrịbama. 2004
Akwa mmiri Anichkov, 80Ochi 40, akwụkwọ, gouache, 2002
Kamennoostrovsky atụmanya. 50.90, nka welara, pastel. 2005
A bụ m onye ọsịse ihe. Okwu, onye ji nganga maka afọ mgbe m nwere ike ikwu banyere onwe m. Great Eugene Delacroix sị ozugbo: "sere – neboltlivoe art, na nke a bụ ya bukwanu ùgwù ". Na foto a ga-asị ọzọ banyere m, karịa ihe ọ bụla akụkọ. Chọta gị ọkpụkpọ - bụ oké ike. ma mgbe ọrụ n'ezie na-amasị ọ bụghị naanị kere, ma ọtụtụ ndị ọzọ - Ọ bụ nnọọ na-akwado ma na-enye ike.
Ọrụ m juputara n'ọchịchọ nke igosi ụwa site na njiko nke anya m na mmetụta m.. Ọ bụghị mmadụ niile nwere ike ikwenye na ọhụụ nke onye na-ese ihe Oleg Solovyov, ma e nwere ọtụtụ mmadụ n ’ụwa, onye na oru nke Kandinsky, Picasso ma ọ bụ Chagall yiri nke ochie. Na n'agbanyeghị eziokwu, na anyị bi n'ụwa ọgbara ọhụrụ, nka nke eserese na kwaaji na akwukwo ebipụbeghị amara ya.
Ọtụtụ mmadụ na-ekpebi ịtụ ihe osise sitere n'aka onye na-ese ihe. Ma, n'amaghi ihe banyere agba, furu efu n'ụdị dịgasị iche iche na ihe dị iche iche. Onye ọ bụla na-ese nwere onwe ya na usoro nke na-arụ ọrụ, ụzọ ha si agba Search, ụdị na style. My ọrụ - dịkọrọ ndụ art. Na ọ bụ ezie na sere - nkà oge ochie na ụwa, M na-ahọrọ ndị ọzọ pop art, avant-garde.
The nchoputa nke avant-garde a na-ewere site Wassily Kandinsky. Gịnị dị ịrịba ama bụ na-emekarị na art?
The search maka n'ụdị ọhụrụ, oriri, ekwekọghị, support ọhụrụ na ụwa nke sere.
Agugo nke kpochapụwo na ala ghọtara, nnupụisi. Avant-garde art na-permeated na mmụọ nke zuru mgbanwe.
Agwa foto - controversial, ambiguous, mgbagwoju.
The mmeghachi omume otu picture pụrụ ịbụ nnọọ pola, ma maa agaghị ahapụ onye ọ bụla indifferent. Ọtụtụ n'ime ndị ọrụ gụnyere ke àkù nke ụwa art. The kasị ama nna ukwu nke avant-garde - Salvador Dali, Marc Chagall, olulu Mondrian, Pablo Picasso na ndị ọzọ.
Pop art dịtụ na-adịbeghị anya, na n'etiti 20 na narị afọ. Na dị ka otu n'ime alaka nke avant-garde, Ọ na-egosipụta mmetụta nke na-ewu ewu omenala. Na pop art kwalitere na ebe dị otú ahụ dị ka situational na kinetic art, nkịtị expressionism, Neo-Pop Art.
Nke a style họrọ nka, na-achọ na-egosi na unvarnished ndụ gburugburu, eleezie deride oge a vulgarity, enweghị mmasị na ihe ọjọọ ndị ọzọ nke ọha mmadụ. Ọ bụ ya mere m nso a-awụ akpata oyi pụrụ iche style na ụwa nke art.
M na-agbalị jikọọ ọtụtụ penmanship, Ya mere o kere ya style, nke nkà aka dere. Eserese na-jupụtara na allegories, metaphors, omimi ekwesighi.
Na ike ga-nyere iwu?
Ihe osise iji nye iwu bụ ụzọ dị ịtụnanya iji gbakwunye iche na ime ọ bụla, ebe arụmọrụ ya agaghị emebi. N'ezie, ị pụrụ ịzụta a okokụre sere. ebe, gwa m echiche gi, ọhụụ nke kwaaji n'ọdịnihu, nzube ya.
Ọ bụrụ na onye ahịa ahụ na-achọ onyinye omenala maka enyi, ndị ikwu ma chọta nhọrọ kwesịrị ekwesị n'etiti ọrụ agwụla - kọntaktị. A ga-emezu iwu nke ihe mgbagwoju anya ọ bụla n'oge ọnụ ọnụ.
Kedu ihe osise m na-ese ka m nye iwu?
Maka onyinye, ihe ngwọta kachasị mma bụ ihe osise. Ma obu eserese site na foto. Ịtụ a Eserese nke artist – Ugbu a bụ ihe pụrụ iche ọ bụla ezumike, n'ihi ihe ọ bụla. N'ụzọ kwesịrị ekwesị gburu sere na kwaaji site na a foto ga-enwe obi ụtọ merie a ugbu, dị ka a girl, na na ụmụ nwoke na afọ. Pictures of foto ịtụ - nke a bụ ihe kasị mma nhọrọ maka azụmahịa ndị mmadụ, na-arụsi ọrụ, na ha enweghị oge na-ese n'ihu onye na-ese. Jide n'aka na - na m ga-gaa na akaụntụ niile na mbụ kwetara nkọwa: igodo, usoro, ịke.
Eserese bụ ihe ndabere nke ọrụ ọ bụla na-ese ihe. Nwere ike ịtụ ihe osise na isiokwu ahọpụtara na kaadiboodu ma ọ bụ akwụkwọ mmiricolor. Ana m arụkwa ọrụ na eserese kọmputa, ya mere ndị ahịa nwere ike ịtụkwasị obi: mmepe nke a ụlọ ọrụ logo, igbu osisi, pet ịbịaru na ndị ọzọ.
Omenala mmanụ eserese bụ dara oké ọnụ n'ime ime. Eziokwu, nke m nwere ike inye gị.
Obodo odida obodo - ihe osise pụrụ iche na enweghị atụ, dị ka obodo ndị ahụ. Laa azụ na narị afọ gara aga, ha ama ama na Europe., ma ugbu a, ha bụ omume na mba anyị. Ihe oyiyi dị otú a na-agbanwe agbanwe: o kwesịrị ekwesị anya ke ọ bụla n'ime ụlọ. The naanị, Gịnị kwesịrị ntị ka - ẹbọ.
Abstract sere bụ zuru nke ike na okwu. Ọ ga-obi ụtọ ya ahịa na mgbe na-adọta uche. Eserese a style na-ewu ewu nnọọ. Oil sere na kwaaji ke ẹbọ nke nkịtị nkà ma ọ bụ pop art ga tinye a oké olu okwu ka ọ bụla n'ime ụlọ.
The peculiarity nke ọrụ m
akwukwo size - ndị ahịa si oke nke ọ bụla udi.
Style - ka họọrọ ndị ahịa.
Onwunwe - kwaaji, katọn, akwụkwọ, kraft.
akụrụngwa: mmanụ, acrylic, ink, gouache, ndịna, mbuaha media, jel pen, wdg.
Gịnị mere unu na-afọ na-arụpụta?
Elu àgwà picture.
Speed ​​of egbu.
The picture nwere ike nye iwu remotely.
na-arịọ, M nwere ike ịsụgharị image n'ime electronic ụdị.
Adaba ịkwụ ụgwọ ụzọ.
The osise n'ime ime
Họrọ a picture maka n'ime ime mma - otu siri ike, nakwa dị ka Olee. Ga-gaa na akaụntụ ọtụtụ nkọwa: ngwá ụlọ, fixtures, agba, size nke ụlọ na nzube ya. Ịzụta ihe osise maka ime na Russia na-achọ a ụfọdụ ihe ọmụma na echiche nke style. N'ụzọ ziri ezi họọrọ ákwà ga-obi ụtọ ndị enyi gị na ndị ezinụlọ, a ọtụtụ okwu banyere mmadụ uto.
My eserese, rụrụ site iche iche usoro na ịbịaru usoro, ga-ele anya aesthetically ẹnamde na nnukwu na ga-amasị ma nwe, na-abịa ekiri. Zụrụ dịkọrọ ndụ eserese maka ime - ọ pụtara ịzụta a ibe nke artist, na foto ọ bụla, ụlọ ọrụ ndị ọkachamara, ozugbo na-aghọ isi obodo.
Onye ọ bụla nke m na-arụ ọrụ - nke a bụ ọdịdị zuru oke nke professionalism, Dabere gị nhọrọ na-ekewaghị ekewa, nke ga nwere.
A pụrụ ịhụ ihe atụ nke ọrụ na pọtụfoliyo na ibe peeji
Ego ole ka ọ na-eri ịtụ eserese site n'aka onye na-ese ihe
Ihe osise Ego ahụ
Obere si 5000 ete
Obere si 10000 ete
Nkezi si 15000 ete
Nnukwu si 20000 ete
Na mkpokọta Ekwadoro onwe gị
Nkezi ego gosiri, na-enweghị etiti
Ọnụahịa nwere ike ịgbanwe, dabere na ihe na usoro nke igbu ya.
A na-emepụta ego ikpeazụ dabere na ọrụ ahụ, mgbagwoju anya nke igbu na oge.
1996-2000 – Gụsịrị akwụkwọ na Chelyabinsk Art School, Faculty of imewe
2000-2007 – Ọ gụsịrị akwụkwọ na Art na Industrial Academy. siskin (ofufe), oche nkwurịta okwu imewe